नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दियो केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दियो केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता
सोमबार, जेष्ठ ७, २०७५ १७:१६ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको छ। सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको पहिलो बैठकले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यालयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय पनि गरेको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको दुई ठाउँमा रहेको कार्यालय एकै ठाउँमा ल्याई संचालनका लागि आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दि। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले दुवै पार्टी कार्यालयको अवलोकन गरी सकेका छन्।
बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा कार्यदल पनि गठन गरेको छ। पार्टी संचालनका लागि विधानसँग परिपुरक हुनेगरी नियमावली बनाउन महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदल गठन गर्नु परेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। कार्यदलमा नेताहरु देवप्रसाद गुरुङ, बेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेका छन्। कार्य दललाई पार्टी संचालन नियमावली बनाउन १५ दिन समयावधि पनि तोकिएको छ।
बैठकले पार्टी एकीकरणका लागि आवश्यक सुझाव दिन सबै प्रदेश, प्रवास र जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि चार/चार सदस्यीय कार्य दल गठन गरेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रदेश र प्रवास तथा जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज र संयोजक कार्य दलमा रहने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। कार्य दललाई १५ दिन भित्र आफ्नो सुझाव सचिवालयमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि बसेको सचिवालयको पहिलो बैठकले त्यसको संगठन र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि बिफ्रिङ गरेका थिए।
PREVIOUS POST Previous post: सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै (LIVE)
NEXT POST Next post: यी हुन ओली सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बुँदाबुँदामा पढनुहोस
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ ७, २०७५ १७:१६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ ७, २०७५ १७:१६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ ७, २०७५ १७:१६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ ७, २०७५ १७:१६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ ७, २०७५ १७:१६